ရငျးနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်ဦးနှောက် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ဤဆောင်းပါးများကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုဖြင့်ရေးသားထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းနေလျှင်သင်၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည်ဆိုးရွားသောခံစားမှုများသို့မဟုတ်မတည်ရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးများမှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာအိမ်ထောင်ဖက်များသို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များသည်မိမိတို့၏ ဦး နှောက်ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုပုံ၊ ၎င်းတို့သည် 'bonding behaviors' သို့မဟုတ် 'attachment cues' ဟုခေါ်သောအချက်ပြမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ neurobiology နှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသင်ကွဲပြားစွာရှုမြင်လိမ့်မည်။
လူ့ဦးနှောက်မေတ္တာတော်၌တည် Fall မှတည်ဆောက်နေ သင့်ရဲ့မှေ့ eyeteeth သင်၏မေတ္တာအသက်အဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း pair တစုံဘွန်းနှင့်လူမှုရေးစျမယားအပေါ်အခြေခံပါရှိသည်။ သွန်းလောင်းကျွန်တော်တစ်ဦးသိသာသည်အခြားနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျအဘယ်ကြောင့်အပေါ်ကိုလငျး, ဒါပေမယ့် chimps မကျင့်။ pair တစုံ-Bond တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း Construction မဟုတျကွောငျးကရှင်းပြသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးနှောက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး: သင်ဒါဟာများအတွက် Wired နေ Pair ကို Bond တစ်ဇီဝအစီအစဉ်ကိုမယဉ်ကျေးမှု Construction ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနပြုမှုများအရလူသားများသည်စုံတွဲတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံမှုသည်လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောအကြောင်းများကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
ယောက်ျားတွေ: သင်သည်မယား Spectrum အပေါ် Fall ပါနဲ့ဘယ်မှာရှိသနည်း လေ့ယောက်ျားအကြောင်းကိုယုံကြည်ချက်ကျင်းပနယူးသုတေသနမှောက်လှန်။ သင် pair တစုံ-bonder ရောင်စဉ်အပေါ်အဘယ်မှာရှိကြသနည်း ထိုသို့ရောငျ့ရဲရှာတွေ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
Cupid မှစကားပြောလုပ်နည်း သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကဘာလဲအချက်ပြမှုများကိုပေးပို့ခြင်းနေကြသနည်း မေတ္တာ၌တည်းခို၏ညှနျကွား၌သင်တို့၏စရိုက်ဦးနှောက်ခုတ်မောင်းဖို့ကိုဘယ်လို။ အဘယ်အရာကိုပျားရည်ဆမ်းခရီးအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာလုပ်ဖို့။ ပူးတွဲမှုတွေကိုသို့မဟုတ် Bond အပြုအမူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မသိဦးနှောက်ကိုရှောင်ကွင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြထားသည်။
ရည်းစားများ 'Ultimate Sex Hack: Karezza ကာရီဇာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်စွမ်းအင်ပိုမိုများပြား။ ပိုမိုကျန်းမာသောလိင်စိတ်ပါဝင်နိုင်သည်။ “ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တကယ်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာချစ်ကြပြီ။ ငါတို့ဟာဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့တူတယ်၊ အရင်ကမကြားဖူးခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံယူနိုင်ပြီ။ ” Karezza သည်ချစ်သူများအနေဖြင့်သူတို့၏တွဲဖက်သောစက်ယန္တရားကိုခိုးယူနိုင်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကန့်အသတ်မရှိဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အော်ဂဲနစ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြှင့်။
မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကို အချစ်ဇာတ်လမ်းရေရှည်တည်တံ့ရန်သင့် limbic system ကိုခုတ်မောင်း။ Bond အပြုအမူတွေမှာအများဆုံး In-depth ကိုကြည့်။ သငျသညျအထဲကကြိုးစားရန်အဘို့အ Bond အပြုအမူတွေ၏ရှည်လျားသောစာရင်းပါရှိသည်။ မေတ္တာနှင့်ပူးတွဲမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်အများဆုံးဆောင်းပါး။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျောက်-စတိုင်အတွက်တည်းခို အဘယ်ကြောင့် pair တစုံ-Bond tamarins နှင့်လူသား chimps ထံမှကွဲပြားခြားနားသောရှိပါသလဲ ဘယ်လို monogamous မျောက်မေတ္တာ၌ရှိနေရပါသလဲ မျောက် Bond အပြုအမူတွေအတူ။ ဦးနှောက်ကိုနှောင်တွဲဖို့ဒါမှမဟုတ်န်းကျင်အရူးမှစနစ်တကျဘယ်လောက်ရှင်းပြသည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့မျောက် tamarin လိုပဲရငျးနှီးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝဓါတုဗေဒ impact နိုငျကွောငျးအခြို့သောအပြုအမူရှိသည်။
အားလုံးအရေပြား-ဆာငတ် Cuddle Sluts Calling လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ဖူလုံရေးများ၏ concept ကိုဘယ်လိုအလားအလာရှိသနည်း သင်ဟာရည်းစားများအကြားရှိနေပြီးစိတ်ရှုပ်နေလျှင်၊ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်ခိုးယူခြင်းမှနှစ်ဆယ့်လေးပါးသည်မည်သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းဖတ်ပါ။
သူမသည် / သူငါလိင်လိုအပ်ကြည့်ရှုပါမရနိုင်သလား? အပျော်အပါးမှ numbed ဦးနှောက်သတိပြုပါ။ လိင်သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်အပြီးတွင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်မိတ်ဖက်များအားစည်းညှိခြင်းမှမည်သို့ဖယ်ထုတ်နိုင်မည်နည်း။ အော်ဂဇင်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့အမြင်ကိုယာယီပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့သီအိုရီကိုလေ့လာထားခြင်းဖြစ်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Make ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း လိင်တစ်ဦးမေ့လျော့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ Coolidge Effect ရှောငျ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အများစုအတွက်အယူအဆသစ်တစ်ခုရှိသော်လည်းနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ရငျးနှီးသည်။
oxytocin, Fidelity နှင့်လိင် ယောက်ျားတစ်ယောက် oxytocin တက် jacking အားဖြင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်ကိုယ်တော်တိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါသလား? “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟော်မုန်း” သည်လူတို့အားဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ဝတ္ထုမိတ်ဖက်များနှင့်ဝေးကွာသွားစေရန်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
(2010) အားလုံးအရေပြား-ဆာငတ် Cuddle Sluts Calling
ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး: သင်ဒါဟာများအတွက် Wired နေ (2011)
Gary Wilson သည်စာရေးသူလူငယ်တစ် ဦး နှင့်အတူ oxytocin နှင့်အင်တာနက် porn အကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ယောက်ျားတွေ: သင်သည်မယား Spectrum အပေါ် Fall ပါနဲ့ဘယ်မှာရှိသနည်း (2011)
လူ့ဦးနှောက်မတ်ေတာသညျ (2010) တွင် Fall မှတည်ဆောက်နေ
oxytocin, Fidelity နှင့်လိင် (2012)
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျောက်-စတိုင် (2010) တွင်တည်းခို
မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကို (2010)